Ny fiadian'Andriamanitra: ampahany 6 nohazavaina sy misy dikany?
Fantatrao ve? Ny fiadian'Andriamanitra?
Tahaka ny ady, izay ilain'ny miaramila ny fitaovam-piadiana manokana toa ny fehikibo amin'ny bala, fiarovan-doha mba hiarovana ny lohany, fitaovam-piadiana ary zavatra hafa.
En el tontolo ara-panahy, mila fiadiana miaro antsika koa isika ary manampy antsika hiatrika ireo zava-tsarotra mety hitranga amin'ny fiainana.
Ao amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindra ao amin'ny toko farany amin'ny Efesiana, ny iray amin'ireo taratasy izay nosoratan'ny Apôstôly Paoly dia nanoro hevitra ny mpino rehetra hampiasa ny fiadian'Andriamanitra hiady amin'ilay ratsy ka hahazo fandresena.
Ny tontolo ara-panahy dia ao anaty ady tsy miova ary izany no tsy maintsy iomanantsika amin'ny fotoana rehetra.
1 Ampahany amin'ny lalan'Andriamanitra
1.1 1: Fehikibo fahamarinana
1.2 2: Ny saron-tratra fitsarana.
1.3 3: Ny fanomanana ny filazantsara
1.4 4: Ny ampinga finoana amin'ny fiadian'Andriamanitra
1.5 5: Ny fiarovan-doha famonjena amin'ny sandrin'Andriamanitra
1.6 6: Ny sabatry ny Fanahy ao amin'ny fiadian'Andriamanitra
Ampahany amin'ny lalan'Andriamanitra
Ity fitaovam-piadiana ity dia ahitana fitaovana ara-panahy andiany izay, mba hahafantaranao ny fampiasana azy dia mila mahafantatra ny fomba fampiasana azy ireo ianao ary noho izany dia milaza aminao izahay ny zavatra rehetra ilainao mba hahafahanao miaro amin'ny fiarovan-tena ara-panahy.
1: Fehikibo fahamarinana
Ny fehikibo fahamarinana dia antsoina ao amin'ny Efesiana 6:14. Ara-batana sy tamin'ny andro taloha dia nanao fehikibo ny miaramila mba hitazonana ny akanjo vita amin'ny akanjo ary manome fanampiana ny vatana.
Amin'ny lafiny ara-panahy, ny fehikibo dia lasa fahalalana sy fiarovana izay mahatonga antsika hahatohitra tena, ka resy lahatra fa misy antsika zanak'andriamanitra, na dia te handresy antsika amin'ny fomba hafa aza ilay ratsy.
Mba hampiasa ny fehikibo marina dia tokony ho feno ny tenin'ny Tompo ny fontsika tsy maintsy manatanjaka ny tenantsika amin'ny vavaka. Mila miaina fiainana manontolo sy mafy orina amin'ny lalan'i Kristy isika.
2: Ny saron-tratra fitsarana.
Tahaka ny tamin'ny andro taloha dia misy ny fitaovam-piadiana, izay nampiakarana ny taova anatiny, araka ny fantatsika ankehitriny fa ilay akanjo vita amin'ny bala.
Ireo miaramila izay mandeha amin'ny tontolo ara-panahy dia mila miaro ny fontsika tsy hanafika ny fahavalo rehetra.
Ny saron-tratra fitsarana dia lasa manarona izay manome antsika ny rariny mahatratra antsika amin'ny alalàn'i Jesosy ary ny sorona nataony ho antsika dia ny hazofijalian'i Kalvary.
Raha hampiasa azy io dia tsy maintsy tadidintsika ny mombamomba antsika ao amin'i Kristy, fantaro fa noho ny sorona nataony dia voamarina eo alohan'ny rain'ny lanitra isika.
Tsy afaka ny hino izay lazain'ny fahavalo amintsika isika sy ny fiampangana azy na ny fahatsiarovantsika ny fiainantsika taloha na ny fahotantsika.
Ireo no paikadin'ilay ratsy handratra antsika ary ny saron-tratra ihany no miaro antsika amin'ny fanafihana.
3: Ny fanomanana ny filazantsara
Ny mpiady rehetra dia mila miaro ny tongony amin'ny fanafihana satria ireo koa dia lasibatra lehibe amin'ny fahavalo.
Raha miaramila tsy mahatoky amin'ny diany dia mora ny manafoana. Mila mandray fepetra hentitra sy azo antoka ny miaramila, tsy misy fisalasalana na tahotra.
Ny kiraron'ny filazantsara dia tsy maintsy apetraka amin'ny fomba azo antoka, matokia izay nomen'ny Tompo anao, mijanòna eny an-dalana.
Fenoy fiadanana, fifaliana sy fitiavana ny tenanao ary avelao hiparitaka amin'izay manodidina anao izany. Ny antso dia ny hitory ny Filazantsara amin'ny voary rehetra.
Miaraka amin'ny dingana azo antoka tsy miambina hatrany tsy handeha amin'ny ahy na izay zavatra maranitra azon'ny fahavalo avelan'ny lalana eny. Mandroso lalandava ary tsy hanohana, mitombo amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
4: Ny ampinga finoana amin'ny fiadian'Andriamanitra
Eto dia nametraka torolalana ny Apôstôly Paoly hampiasa ny ampingan'ny finoana. Fantatsika fa ny ampinga dia fitaovam-piarovana izay afaka manampy anay amin'ny ady ka tsy misy tratran'ny fanafihana iray akory.
Ao amin'ny tontolo ara-panahy dia mila ampinga koa isika satria ny fahavalo dia manipy ny iray izay, raha tratrantsika, dia mety handratra be antsika.
Ny ampinga amin'ny finoana dia ampiasaina amin'ny fomba mahery vaika rehefa mihamafy orina ny finoantsika. Amin'izany dia tsy maintsy mamaky ny tenin'Andriamanitra isika, hitadidy azy ary, ny tena zava-dehibe dia mampihatra izany.
Aoka ho tsarovantsika fa ny finoana dia toy ny hozatra ary raha tsy fampiasa izany dia aseho, dia andao isika hampihatra finoana ary hatanjahana mba hiarovany antsika amin'ny fanafihana rehetra atorin'ilay ratsy antsika.
5: Ny fiarovan-doha famonjena amin'ny sandrin'Andriamanitra
Ny fiarovan-doha dia satroka miaro ny lohan'ilay miaramila. Ny iray amin'ireo sombintsombin'ny fitaovam-piadiana rehetra.
Zava-misy marina ny saintsika ary lasibatra mora be ho an'ny fahavalo satria manafika mivantana ao an-tsaintsika izy io ka mahatonga antsika tsy ho diso na mampino antsika zavatra tsy marina araka ny tenin'ny Tompo.
Mampiasa ny fiarovan-doha na fiarovan-doha famonjena isika rehefa mahatadidy fa voavonjy amin'ny finoana isika ary izany dia fahamarinana tsy azo ovaina.
Tokony hiady sy hiady hevitra ratsy amin'ny tenin'Andriamanitra isika satria tia antsika ary mamela ny fahotantsika rehetra.
6: Ny sabatry ny Fanahy ao amin'ny fiadian'Andriamanitra
Eto misy fahasamihafana lehibe satria ny fitaovam-piadiana hafa dia ny miaro antsika fa ity dia manokana satria noforonina mba hahafahantsika manafika ny herin'ny ratsy. Amin'ny sabatra dia afaka mandratra sy mamono ny fahavalo isika isaky ny tiantsika hatao amin'ny lalana.
Miaraka amin'izany dia afaka miaro ny tenantsika isika ary manamaivana ny lalan-kalehantsika, mahazo antoka fa mahery izy ary raha fantatsika ny fomba fampiasana azy dia hahazo ny fandresena isika.
Mba hampiasa tsara ny sabatry ny Fanahy dia tsy maintsy feno ny tenin'Andriamanitra isika satria mavitrika ny sabatra rehefa miteny ny teniny isika. Zava-dehibe ny afaka mampiasa azy tsara amin'ny toe-javatra rehetra ary rehefa ahavita mampahomby amin'ny fiainantsika isika.
Tsarovy fa ny Baiboly dia toy ny boky torolalana amin'ny fiainana ary ireo teny ireo dia mila manana hery izay tsy maintsy ataontsika ny zavatra izay aseho eo.
Ny fiadiana ara-panahy rehetra dia miasa amin'ny alalan'ny finoana ary mihamatanjaka ao afovoany ny vavaka.
Arakaraka ny hamakiantsika ny teniny, no hinoantsika bebe kokoa ary ho afaka hampiasa amin'ny fomba mahomby kokoa isika. Ny vavaka no fanalahidin'ny zava-drehetra, ny firaisana amin'ny Fanahy Masina no hitarika antsika hiaina araka ny sitrapon-drain'ny lanitra.